UJesu uthi: umama wami akawuphiki umusa kulabo abenza lomkhuleko | Ngiyamthanda uJesu
di UPaolo Tescione - Ephreli 17, 2021
UJesu no kusho umthandazo kusuka eMadonna. “Cishe ezinhlanu ngangisesihlalweni sokuvuma izono. Ngemuva kokuhlolwa kukanembeza, ngenkathi ngilinde ithuba lami, ngaqala ukwenza i- isiqeshana seMadonna. Ngisebenzisa iRosari, esikhundleni se- "Hail Marys", ngithe izikhathi eziyishumi "Mary, Themba lami, Ukuzethemba kwami" futhi esikhundleni se "Pater Noster" "Khumbula…". UJesu wabe esethi kimi:
“Ukube bewazi nje ukuthi kungakanani uMama uyakujabulela wami lapho ngizwa umkhuleko onje: Angeke akunqabe noma yimuphi umusa, uzonikeza umusa omkhulu kulabo abazowufunda, inqobo nje uma benokuzethemba okukhulu ”.
UJesu nokuphindaphinda kwe-chaplet: umkhuba
Ngomphakathi umqhele wamarosari. Kumabumba wamabala kuthiwa:
Khumbula, Oyi-Virgin Mary emsulwa kakhulu, akukaze kuzwakale emhlabeni ukuthi noma ngubani uke waphendukela ekuvikeleni kwakho, wacela usizo lwakho, wacela ukuvikelwa kwakho futhi washiywa. Kugqanyiswe yilokhu kuzethemba, ngiphendukela kuwe, O Mama, O Ntombi Esezintombini, kuwe ngiza futhi, ngisole isoni, ngikhothama phambi kwakho. Awufuni, oh Mama weZwi, ukudelela imithandazo yami, kodwa ungizwe ngokufanele futhi ungizwe. Amen.
Kokusanhlamvu okuncane uthi: Maria, Themba lami, Ukuzethemba kwami
Kwesinye isikhathi sithambekele ekucindezeleni i- Intando kaNkulunkulu ngokushesha kunokuba uNkulunkulu akhethe ukuhamba. Ngenxa yalokho sigcina senza intando yethu hhayi eyikaNkulunkulu.isihluthulelo ukubekezela. Kumele silinde ngokubekezela ukuthi iNkosi isebenze kithina ukuze ibe yiyo eyenza zonke izinto ngathi. Ngempela, isenzo sokubekezela siyinto efiswa uNkulunkulu ngokuqinile empilweni yethu. Ngokubekezela, siyakwazi ukudedela intando yethu nemibono yethu futhi sibuke iNkosi ifeza okuningi kakhulu kunalokho ebesingakwenza sisodwa. Kumele sikhuthale futhi siphendule iNkosi lapho ivula umnyango noma ikhomba indlela, kepha kufanele silinde yona ukuthi ivule futhi ikhombe (bheka Ijenali No. 693).
Uvelaphi ukungabekezeli empilweni? Yini ofuna uNkulunkulu angene kuyo ngokushesha? Cabanga ngalomzabalazo wangaphakathi futhi wazi ukuthi ubuhle besineke buvula umnyango wokuqondiswa futhi umusa lowoNkulunkulu ufuna ukunikela. Makenze izinto ngesikhathi sakhe nangendlela yakhe uzothola ukuthi izindlela zakhe ziphakeme kakhulu kunezakho.
Nkosi, ngiyazi ukuthi izindlela zakho zingaphezulu kakhulu kwezami nokuthi imicabango yakho kumele ikhethwe kunami. Ngiphe umusa ukubekezela ezintweni zonke. Ngisize ngikulindele futhi ngithemba ukuthi umusa wakho uzonikezwa ngobuningi ngokobuhlakani bakho obuphelele. Jesu ngiyakholelwa kuwe.
Manje funda le chaplet ku-Divine Mercy bese ucela umusa
USanta wezimbangela ezingenakwenzeka: iva, i-rose kanye nesikhalazo